दैवकाे लिला यस्तो! नारायणीमा हाम फालेकि महिलाकाे जिउँदै उद्दार (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > दैवकाे लिला यस्तो! नारायणीमा हाम फालेकि महिलाकाे जिउँदै उद्दार (भिडियो सहित)
हिन्दु धर्ममा भनिन्छ मानिसको जिवन ८४ लाख अन्य जिवन भोगी सकेपछि मात्र पाइन्छ । सामाजिक र पारिवारीक जिम्मेवारीका लागि पनि जिवन निकै महत्वपूण छ । तर जिवन देखि हार खाएक कतिपय कायरहरुले देह त्यागको निर्णय गरेका हुन्छन् । जिवनमा आइपरेका समस्या देखि जुध्न नसक्नेहरुले विभिन्न उपाय अपनाएर जिवन फालेका हुन्छन् । तल प्रस्तुत गरिएको यो भिडियोमा पनि त्यस्तै दृष्य छ । एक जना महिला चितवन स्थित नारायण नदिमा हाम फालिन् ।
तर उनको बाँच्ने भाग्य भएर होला हामफाल्दै गरेको अन्यले देखे र तत्काल उद्दार गरे । रातो लुगा लगाएको ति महिलाको उमेर ४० वर्ष उमेर भन्दा माथिको जस्तो देखिनछ । उनले के कारणले त्यस्तो निर्णय लिइन् भन्ने कुरा भने खुलेको छैन । उनको परिचय पनि यो भिडियोवाट खुल्दैन । महिला नदिमा हामफालेको देखेपछि उद्दारकर्ताले स्टिमरको प्रयोग गरेर नदिमै पुगेर महिलालाई बाहिर निकालेका छन् ।
स्टिमरमा गएकाहरुले पनि आफ्नो सुरक्षाको विशेष उपाय भने अपनाएको देखिदैन । आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर दुईवटा स्टिमरमा गएका केही युवाले ति महिलालाई पानीवाट तानेर स्टिमरमा हालेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
चितवन स्थित नारायणी नदिमा केही महिनाको अन्तरालमा यस्ता घटना भइरहेका हुन्छन् । अधिकांशको ज्या न गएको समाचार प्रकाशमा आउँछन् । पानीको वहाव धेरै र गहिरो भएका कारण त्यसरी हामफालेकाहरुलाई बचाउन भने निकै मुस्किल पर्छ ।
म एक महिला हुँ, तर श्रीमानलाई बिगार्ने पनि महिला नै हुन, किन गर्छन महिलाहरूले नै यस्तो! सहमत भए एक शेयर गर्नुहोला।
सौता उपाहार ल्याइदिए… पेटमा २ महिनाको गर्ब छ, साथ दिने कोहि छैन म म’र्न चाहान्छु भन्दै रुदै श्रीमती (भिडियो)